Shiinaha S216 Waxsoosaarka Sifeeyaha & Warshadaha Sare &. | S-conning
S216 Mashiinka Calaamadaha Xawaaraha Sare & Sare
S216 waa astaan ​​si otomaatig ah loo naqshadeeyay oo ka baxsan sanduuqyada dusha sare & hoose ee kala duwanaanta maalinlaha qurxinta, elektaroonigga, dawooyinka, cuntooyinka iyo wax soo saarka warshadaha kale.
Qaab dhismeedka hal abuurka
Iswaafajin ballaaran oo Mashiinka Calaamadeynta Dhalada ah oo loogu talagalay shay cabbirkiisu kala duwan yahay. Habka calaamadda haynta pneumatic ee gaarka ah, wuxuu xoojiyaa saxnaanta calaamadda xagasha sare iyo hoose.
calaamadeeyaha waxaa xakameynaya isgaarsiinta xawaaraha sare ee isgaarsiinta (HMI) si loo hubiyo in wareejinta xogta ay tahay mid deggan oo sax ah. Waxay u oggolaaneysaa jaantuska koontaroolku inuu noqdo mid toosan oo xasilloon, kaas oo dammaanad ka qaadaya mashiinka wax soo saarkiisa joogtada ah si sax ah.
* Naqshad macquul ah oo dabacsan oo ku habboon calaamadeynta alaabooyin kala duwan.
* Calaamadeyn karaa diyaarad shey kala duwan, balaarin kara kala duwanaanta arjiga.
* Marka lagu daro codsadayaasha calaamadda dheeriga ah waxay xaqiijin karaan qorista laba-laabista iyo ku celcelinta calaamadda usha, Waxaan ku dari karnaa qaybo kala duwan oo loogu talagalay ogaanshaha iyo diidmada shaqada internetka iyadoo loo eegayo shuruudahaaga.
* Suunka isku haysa ee firfircoon .ensure booska calaamadeynta si sax ah.
* Nidaamka calaamadeynta ee ay maamusho shirkadda Siemens micro process PLC, hubinta waxqabad deg deg ah oo joogto ah.
* Qeybinta calaamadda waxaa wada matoorka fasalka warshadaha (Yaskawa / Schneider / Honeywell) si loo hubiyo calaamadeynta saxsanaanta, waxtarka, iyo xawaaraha iyadoo ku yar isticmaalka tamarta. (Wixii dalbasho xawaare sare leh, mootada adeegga ayaa la dooran karaa)
* Waxay uga faa'iideysataa heer sare heer sare oo ah fiber optic iyo dareemayaal infrared ah (Keyence / Leon / Dalsa / Sick / Leuze) si loo ogaado saxda ah iyo calaamadda kicisa faragelin la'aan.
* Nidaamka firfircoon ee mishiinka buuxa wuxuu bixiyaa xasiloonida ugu badan iyo saxnaanta.
* Lagu dabaqi karo dhammaan noocyada sanduuqa ama dhalooyinka dhexroor 30-150mm.
* Ansixin heer sare ah oo ka timaadda Jarmal, Faransiis, Jabbaan, sumadaha Mareykanka.
* Naqshad xasaasi ah iyo qaab dhismeed cilmiyaysan.
* S-conning naqshadeynta patent gaar ah, fiican ee warshadaha xirxirida.
* 12 sano oo khibrad ah, khabiir ku ah debugging.
* Adeeg qoto dheer kadib iibka.
* Xawaaraha calaamadeynta ayaa si otomaatig ah loogu waafajiyaa xawaaraha gudbiyaha si loo hubiyo sumadeynta tayada.
* 50 Xusuusta Shaqada si fudud loogu xasuusto.
* Qalabka adeegga gawaarida saxda ah ee saxda ah.
* Hubso shuruudaha deegaanka GMP.
* Shaashadda taabashada HMI ee xirfadeed: shaashadda xakamaynta taabashada oo aad u badan.
faa'iido dheeraad ah
S216 Top & Bottom Automatic Labeler wuxuu ku qalabeysan yahay awood u habeyn habboon oo loogu talagalay howlaha wax soo saar ee kala duwan, sida calaamadeynta goobaha iyo shuruudaha xuduudaha wax soo saarka. Tani waxay damaanad qaadeysaa wax soo saarkaaga wax soo saar joogto ah iyo muuqaalka ugu habboon ee calaamadeynta.
Hore: Kartoonka / Sanduuqa Sare iyo Mashiinka Calaamaynta Dusha hoose
Xiga: Mashiinka Calaamadeynta Dhalada Wareegga Labaad ee Flat Square
Mashiinka Calaamadaha Dhalada Ganacsi, Daabacaha Label Dhalooyinka Qurxinta, Nidaamka Syringe iyo Nidaamka Calaamadaha, Mashiinka Codsadaha Label ee Khaanadaha, Mashiinka Mashiinka Balaastikada, Top Iyo Labeler Labeler,